Idrettsdagen (maalin sports) - Idrettsrådet Stavanger
Golaha Isboortiga ee Stavanger wuxuu qabtay Janaayo 5, 2019 maalinta Isboortiga ee ugu horeysa Stavanger Forum, isaga oo matalaya Rogaland Sports Circle iyo xiriir la leh Sports Gala 2019 oo la qabtay isla maalintaas. Maalinta Isboortiga waxaa ka mid ahaa nashaadaadyo iyo bandhigyo ay ku jiraan 29 koox / isboorti oo kaladuwan iyo ku dhawaad ​​3000 xubnood oo dhagaystayaal ah ayaa ka qeybgalay munaasabadda. Dhamaan kooxaha isboortiga waxay leeyihiin aag u gaar ah oo loo qabto qof walba inuu ku tijaabiyo isboortiga hal qaab ama mid kale. Kala duwanaanshaha isboorti iyo noocyo kala duwan oo qalab ah ayaa suurtageliyay dhammaan da ‘kasta iyo dadka naafada ah inay isku dayaan nashaadyada ku habboon.
Kooxaha isboortiga ee maalinta Isboortiga ayaa la siiyey gole aad u wanaagsan oo lagu dhiirrigelinayo nafsadooda iyo isboorti u gaarka ah. Dhageystayaasha waxaa lasiiyay fursad ay isku dayaan dhowr isboorti oo kaladuwan si ay u helaan faham wanaagsan oo ku saabsan aagaga ay daneynayaan. Tani waxay noqotay fursad qaas u ah carruurta iyo dhallinta yar si ay u helaan isboorti ay rabaan inay wax badan isku dayaan. Wixii ka dambeeyay Maalinta Ciyaaraha ee 2019, kooxo dhowr ah oo isboorti ayaa soo sheegay inay kordheen xiisaha iyo xubnaha firfircoon ee isboortiga ay sabab u tahay dhacdada.
Sababo la xiriira jawaabta wanaagsan ee kooxaha isboortiga, dadweynaha iyo siyaasiyiinta dhacdadaas ka dib, Golaha Isboortiga Stavanger wuxuu doonayaa inuu sii wado inuu fursaddan siiyo isboortiga iyo dadweynaha ku nool Stavanger.
Maalinta Isboortiga waxay cadeyneysaa inay fursad qaali ah u tahay degmada Stavanger inay soo bandhigaan noocyada kala duwan ee isboortiga cajiibka ah ee ay heli karaan qof walba oo magaalada jooga!
Markii ugu horreysay maalinta Isboortiga ee 2020, Golaha Isboortiga wuxuu ka bilaabay Tartanka Fasalka ee Iskuulka Stavanger halkaas oo lagu casuumay dhammaan iskuulada Stavanger!
Isku-diyaarin si fudud – fasal kasta oo iskuul ah ayaa loolan kula jiraa inuu ladhaqmo ardayda badankoodna guuleystehu wuxuu helayaa SUMMER END oo ay diyaariyeen Isboortiga Isboortiga oo leh cunto, cabitaanno iyo nashaadyo xiisa leh!
Fasalka oo ay kaqeybgalaan inta badan, kuna saleysan boqolkiiba fasalka, wuxuu ku guuleystaa SANO BADAN
Si aad ugu guuleysato waa inaad haysataa ugu yaraan 75% kaqeybgalka fasalka iyo ugu yaraan 18 arday
Qof kasta oo kaqaybqaata ugu yaraan 50% fasalka maalinta Isboortiga waxaa sidoo kale lagu dari doonaa sawirka ‘SUMMER END’
Sannadkii ugu horreeyay, waxaa jiray 34 koox isboorti oo ka qeybqaatey iyo fasalkii ku guuleystey DUGSIGA SUMMER XARUN wuxuu noqday fasalka 7C ee Dugsiga Kvernevik oo ay lajireen dhammaan 23ka arday ee fasalka!
Kaqeybgalka kooxaha isboortiga Idrettsdagen 2019:
Kaqeybgalka kooxaha isboortiga Idrettsdagen 2020: